Heavy Duty Truck, Construction Truck, Low Bed Trailer - Izithuthi zaseMpuma
Iindidi ezahlukeneyo zeeprojekthi kunye neethenda
Iiprojekthi noShishino Oomatshini bethu Ukusebenza ngaphakathi
Izithuthi zaseMpuma zaMazwe ngaMazwe i-Co, zinikezelwe ukubonelela iilori ezahlukeneyo kunye noomatshini bokwakha kwiindawo ezahlukeneyo zeeprojekthi. Sinikezela ngendlela elungileyo yokunceda abathengi bethu balondoloze uhlahlo-lwabiwo mali kunye neendleko ezizayo.
Umsebenzi onzima wokuTshintshela
Oomatshini beNdlela / uLondolozo lweNdlela
Hot Sale Oomatshini And Iinkuphelostencils
Izithuthi zaseMpuma zamanye amazwe i-Co, Limited, ibisoloko inika oomatshini abohlukeneyo ukusukela ngo-2008 kwaye inikezela ngamalungu kumatshini oqhuba kakuhle.
Izithuthi zaseMpuma zaMazwe ngaMazwe i-Co, limited zinokuhambisa iilori ezahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zokwakha. Umzi-mveliso wethu unokuvelisa iilori zomsebenzi ezahlukeneyo ngokusebenza okungafaniyo, kwaye sinokuhlala sikhetha imodeli echanekileyo yeelori kubathengi bethu. Nceda unxibelelane nathi kuqala kwaye ubuze isicelo ngaphambi kokuba uthenge iilori.
Semitrailers kunye nabathwali
Izithuthi zaseMpuma zamanye amazwe i-Co, Limited inomnini mveliso wokuvelisa ubungakanani obahlukeneyo besemitrailer, kumzi mveliso owahlukileyo wokulungiselela. Ukusuka kwiitoni ezingama-20 kulayishwa ukuya kwiitoni ezingama-300 kulayishwa, umthengi angenza ngokwezifiso itreyila ngokwenqobo yeprojekthi
Isibandisi Iilori -–202 ...
Kufika kwixesha lehlobo kwi2021. Nangona kunjalo, ngeli xesha likhethekileyo xa ubhubhane we-COVID-19 uza okanye uhamba amaxesha ngamaxesha, indlela yethu yobomi itshintshiwe ngandlela thile. Siqala ukukhathazeka ngokutya kwintengiso yethu, especia ...
Inkampani yaseTshayina ityikitye isivumelwano ...
I-China Railway Construction International Group ityikitye ikhontrakthi yecandelo lesihlanu leprojekthi ye-Moscow-Kazan Expressway ngexabiso lesivumelwano se-58.26 yezigidigidi zeeruble, okanye malunga ne-RMB 5.2 yezigidigidi. Oku ...
UMDLA WOKUSEBENZA NE-ORVC?
Ngaphandle kokubonelela abathengi ngoomatshini abachanekileyo nabakulungeleyo kunye neelori, sinewaranti yenkonzo yasemva kwentengiso kunye neenxalenye zokuqala zokuhambisa. Amaqela obuchwephesha anokuthunyelwa kwindawo yeeprojekthi zabaxumi. Yintoni enye, iilori zakho kunye neesemrailer zingenziwa ngokokuyila kwakho kunye neemfuno zakho zalapha ekhaya. Sinamava kunye nobuchule bokuvavanya kunye nokufikelela ekusebenzeni nasekuzimeleleni kweemveliso ezahlukeneyo.
Fumana ifom yokucaphula
Sinenkxalabo malunga nabaxumi bethu.
Kudala siguqula izimvo zibe ziiprojekthi eziphumeleleyo.